မြတ်သာသနာ ဓမ္မစာမျက်နှာ: စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး
၁၂၃၉ တပေါင်းလဆန်း(၂)ရက် မြင်းခြံမြို့နယ် စွန်းလွန်းရွာတွင် အဘဦးသန့်၊ အမိဒေါ်တုတ်တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့ပြီးငယ်နာမည် မောင်ကျော်ဒင် ဖြစ်၏။ ငယ်စဉ်က မြင်းခြံမြို့ မင်းကျောင်းဆရာတော်ထံ အပ်နှံ၍ စာပေသင်စေခဲ့သော်လည်းဉာဏ်ထုံထိုင်းလှ၍ စာကောင်းစွာမတတ်ခဲ့။ (၁၅)နှစ် အရွယ်တွင် ဖခင်ဦးသန့်နှင့်အတူ မြင်းခြံမြို့ အရေးပိုင်မင်းရုံးတော်၌မင်းခစား(၀ါ)မင်းစေအဖြစ် ၀င်ရောက် အမှုထမ်း၏။ အရွယ်ရောက်သောအခါ တစ်ရွာတည်းနေ မရွှေရီနှင့်လက်ထပ်ပြီးသားသမီး (၄)ယောက် ထွန်းကားသော်လည်း (၃)ယောက်မှာ ငယ်စဉ်ကပင် သေဆုံးခဲ့၏။ ယာသမားဘ၀ဖြင့်
ကုသိုလ်ပြုဆုတောင်းခြင်းကို ဦးကျော်ဒင်သည် မင်းခစားအလုပ်ဖြင့် တိုးတက်ရန် လမ်းစမမြင်၍ အသက် (၃၀)အရွယ်တွင်အလုပ်မှနုတ်ထွက်ပြီး မိဘတို့၏ လက်ငုတ်ယာအလုပ် လုပ်ကိုင်၏။ ယာသစ်တစ်ကွက် ထပ်ဝယ်ပြီး ယာသစ်ထဲတွင်နှမ်းကြဲရာမှ နှမ်းတင်းရေ (၄၀)တိတိထွက်သဖြင့် ဆီကြိတ်ပြီး၊ ဘုရား (၉)ပိသာ၊ သံဃာ(၉)ပိသာလှူ၏။(၈.၁၀.၁၉၁၉)တွင် ရေစက်ချပရိတ် တရားနာယူပြီး ညဘက်တွင် ရွာအရှေ့တောင်ဘက်စေတီ၌ဆီမီးများထွန်းညှိပူဇော်၏။ ကြွရောက်လာသော ပရိသတ်များကို ဒေါ်ရွှေရီက ကွမ်းဆေးလက်ဖက်ဖြင့် ဧည့်ခံနေစဉ်ဦးကျော်ဒင်သည် စေတီတော်နားကပ်ပြီး ဆီမီးများကိုကြည့်နေ၏။ ဆီမီးမီးစာအဖျားမှ မဲလာပြီးဆီမီးညွန့်ကလေးများတလျှပ်လျှပ်နှင့် ဆီများဆူပွက်နေသည်ကို မြင်ရသောအခါ ကြက်သီးမွေးညှင်းထကာ ဦးကျော်ဒင်တစ်ကိုယ်လုံးတုန်တုန်သွား၏။ အခုနေအခါ ငါဆုတောင်းရရင် ရတော့မှာပဲဟု ယုံကြည်နေခိုက်၊ ရဟန်းဘောင်တက်လိုသောဆန္ဒပြင်းပြစွာ ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် “ ရဟန်းဖြစ်ရပါလို၏။ ရဟန်းဖြစ်သောအခါ တရားဟောပြော ဆုံးမရပါလို၏။ သတ္တ၀ါတွေ
ငါဟောပြော ဆုံးမတဲ့အတိုင်း ငါကဲ့သို့ တရားကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသတည်း ” ဟု လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သဘောကျဆုတောင်းလိုက်၏။ ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်း ရတော့မှာပဲ ဟုလည်း အလွန်ဝမ်းသာနေ၏။ ထိုနှစ်မှာပင် ဥစ္စာပစ္စည်းအထူးတိုးတက်လာသဖြင့် ခုနေများသေသွားရင် ကုသိုလ်ဆိုလို့ တစ်စက်မှမရှိဘူး၊ အကုသိုလ်ချည်းပဲ၊ ပစ္စည်းကလည်းဒီနှစ်မှ သိပ်တိုးတက်လေတော့ သေချင်လို့ပဲလားဟု တွေးတောမိပြီး သေရမှာ အကြောက်ကြီး ကြောက်လာမိ၏။
၁၉၂၀ မတ်လ ညတစ်ညတွင်“ ငါယခုသာစကားပြောမယ်၊ နောက်ကို ငါစကားမပြောတော့ဘူး ” ဟု
ဘုရားဆင်းတုတော်က စကားပြောသည်ကို အိပ်မက်မက်၏။ နောက်များမကြာမီ “ လမ်းမှန်လိုက်ချင်ရင် လမ်းဆုံ လမ်းမလမ်းလေးခွကနေ စောင့်ပါ၊ လမ်းမှန်ပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟု အိပ်မက်မက်ပြန်၏။ “ အိပ်မက်အတိုင်းလမ်းဆုံ လမ်းမ လမ်းလေးခွ ထောင့်တွင်ရှိသော ဦးကျော်ဒင်၏အိမ်ရှေ့တွင် မဏ္ဍပ်ထိုးရာ (၃)ရက်မြောက်ညတွင်စတီးဘရားသား စက်ထဲမှ စာရေးကြီးဦးဘစံမပင့်မဖိတ်ဘဲ ရောက်လာပြီး လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ၀ိပဿနာ
အာနာပါန အကြောင်းပြောပြ၏။ အာနာပါနဟု ကြားလိုက်လျှင်ပင် ဦးကျော်ဒင်သည် ကြက်သီးတွေ
တဖြန်းဖြန်းနှင့်ဖြစ်လာပြီး၊ ဒီတရားတော့ငါအားထုတ်ရရင် ရတော့မှာပဲဟု ယုံကြည်ပြီး ၀မ်းသာမိ၏။ ထို့နောက်ငါ့မှာစာတစ်လုံးမှ မတတ်ဘူး၊ တရားအလုပ်က စာတတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင် အခက်ပဲ ဟုလည်း တွေးမိပြန်၏။
ထိ၊သိ၊သတိ တရား စတင်အားထုတ်ခြင်း
“ စာတတ်တာ၊ မတတ်တာ လိုရင်းမဟုတ်ပါဘူး ၊ သဒ္ဓါနဲ့ဝီရိယ သာလိုရင်းပါ ” ဟု နောက်နေ့ညတွင်
စာရေးကြီးဦးဘစံကပြောသဖြင့် မုချတရားရတော့မှာပဲဟု ယုံကြည်ပြီး အလွန်ထက်သန်သော သဒ္ဓါ၊၀ီရိယဖြင့်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ကို အားထုတ်တော့၏။ တစ်နေ့တွင် ဦးရွှေလုပ် ရောက်လာပြီး အသိလိုက်ရသေးတယ်၊ကုသိုလ်ရတယ်ဟုပြောသဖြင့် ကုသိုလ်ရရင်လုပ်မယ်ကွာဆိုပြီး ရှူပြန်လည်း နှာသီးဖျားမှာ လေတိုးထိတော့ သိတယ်၊သိတဲ့အပေါ်မှာ သတိထားပြီးရှူ၏။ လမ်းသွားလည်း မြေကြီးနဲ့ ခြေဖ၀ါးထိတော့ သိတယ်၊ သိတဲ့အပေါ်မှာသတိထားပြီးသွား၏။ ပေါင်းထိုးတော့လည်း သတိနဲ့ထိုး၊ ပေါက်တူးပေါက်လည်း သတိနဲ့ပေါက်၊ ရေခပ်လည်း သတိနဲ့ခပ်၏။
နေ့ညမပြတ် အချိန်ရတိုင်း အိမ်(သို့)ယာခင်းထဲတွင်တရားအားထုတ်သည့်အပြင် မောင်ရင်ပေါ်ချောက်တောထဲ၌လည်းသဒ္ဓါ၊၀ီရိယ ထက်သန်စွာဖြင့် ညဥ့်အိပ်ညနေအားထုတ်ပြန်၏။ အားထုတ်ပါများသဖြင့် ကိုယ်ပေါ်၌ ဒုက္ခဝေဒနာများပေါ်လာသောအခါ ဝေဒနာ၏ မမြဲခြင်းနှင့် ဆင်းရဲခြင်းသက်သက်မျှသာရှိသော အမှန်တရားကို သိစေရန်ဝေဒနာပေါ်သတိကပ်ပြန်၏။ သမာဓိအားကောင်းလာပြီး အလင်းရောင်များပေါ်လာသောအခါ ငါဒီတရားအားထုတ်လို့
ဘုရားရောင်ခြည်တော်ဖူးရတယ်ဟု ၀မ်းသာအားရဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ပြန်၏။ မပြတ်မလပ် ကြိုးစားအားထုတ်ပါများလာသည်နှင့်အမျှ စကားပြောလျှင်ပါ မိမိနားလည်လာသော သဘာဝတရားကိုသာ ပြောတော့ခြင်းကြောင့်အရပ်ထဲကလူများနှင့် စကားပြောမတည့် ဖြစ်လာ၏။ အရပ်ထဲရှိလူများက ဒီအကောင်တော့ ရူးပြီ၊ ရူးပြီဟု ပြောကြ၏။ ဦးကျော်ဒင်ကမူ ရူးတာ ကောင်းတယ် ခေါ်သူ၊
ပြောသူမရှိဘူး၊ စကားလည်းမပြောရဘူး၊ နေရာကျလိုက်တာဆိုပြီးတရားအလုပ်ကိုသာ နေမအားညမအား အားထုတ်တော့၏။ သမာဓိအား အလွန်ကောင်းလာသဖြင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို
မှန်ထဲမှာမြင်ရသလို လူတွေဗိုက်ထဲမှ အသည်းနှလုံးကစပြီး ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတို့ကို သေချာစွာမြင်ရ၏။ အောက်ကြည့်ပြန်လျှင်လည်း ခွေးသေကောင်ပုပ်မှာ လောက်တွေခေါင်းချင်းစီပြီး တိုးဝှေ့နေသလို ငရဲသူ ငရဲသားများကိုမြင်ရ၏။
တစ်လစီခြား၍ ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယအကြိမ် တရားထူးများရတော်မူခြင်း
၁၉၂၀ ဧပြီလခန့်တွင် တရားစတင်အားထုတ်ခဲ့ရာ (၁၂.၈.၁၉၂၀) ည (၁၀)နာရီ ခန့်တွင် ပထမအကြိမ်
တရားထူးရတော်မူ၏။ ဆက်လက်တရားအားထုတ်သောအခါ ဒေါ်ရွှေရီက အိမ်အလုပ် ပျက်တယ်ဆိုကာ စူဆောင့်ပြီးတရားအားထုတ်နေသော ဦးကျော်ဒင်အား ခုတင်ပေါ်မှ တွန်းချ၏။ ကြမ်းပြားများကိုလည်း တစ်ချောင်းစီအကုန်ဆွဲနုတ် ၏။နောက်ဆုံး ကြမ်းတစ်ချောင်းမျှ မကျန်သော်လည်း ဦးကျော်ဒင်က ဆင့်ပေါ်တွင်ပေပြီး မလှုပ်မယှက် အားထုတ်မြဲအားထုတ်နေ၏။ ဘာမှအသုံးမကျဘူး တေမိလိုပဲ၊ ဒါလောက်တောင် တရားအားထုတ်ချင်ရင် ကျောင်းသွားပြီးဘုန်းကြီးလုပ်နေပါလား စသည်ဖြင့် နေ့စဉ်လိုလို အမျိုးမျိုး မြည်တွန်တောက်တီး၊ ဆူပူကြိမ်းမောင်း ပြောဆိုသည်ကိုလည်းခံရ၏။ ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာ သတိလိုက်ပါများလာသည်နှင့်အမျှ ဒေါသဖြစ်ရမည့်အစား တစ်စထက်တစ်စသည်းခံလာနိုင်ခြင်းကြောင့် သူတကာက “ နင့်အမေ၊ နင့်နှမနဲ့” ဆဲလိုက်လျှင် မကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ် ပေါ်လာသော်လည်းဒေါသပါလားဟု သတိရလိုက်ခြင်းကြောင့် ဒေါသဆက်မဖြစ်တော့ဘဲ အဖြစ်လည်းနည်းလာ၏။ ရူပါရုံကလေး မြင်သောအခါ
သာယာမှုဖြစ်လာသော်လည်း သာယာတာက လောဘ၊ မျက်စိကမြင်ရုံတင်မြင်တာ ရူပါရုံကသညာ၊ နင်နဲ့ဘာဆိုင်သတုံးဟူသောအသိက သာယာမှုကိုဖြတ်လိုက်၏။ နောက်တော့ ကြားတာလည်း အသိနဲ့ဖြတ်၊ ထိတာလည်း အသိနဲ့ဖြတ်၊နံတာလည်း အသိနဲ့ဖြတ်၊ ထိုသို့ ဖြတ်ဖြတ်သွားရင်း
လောကီသာယာစိတ်များလည်း တဖြည်းဖြည်းနည်းလာ၏။ ဆက်လက် အားထုတ်ရာ (၁၁.၉.၁၉၂၀) ည(၁၀)နာရီခန့်တွင်
တစ်ကြိမ်ရပြီးဖြစ်၍ သွားလမ်းလာလမ်း သိပြီးဖြစ်သဖြင့် အတွင်းဝေဒနာတက်ခြင်းမျှလောက်သာ ထူးခြား၏။
ဦးကျော်ဒင်သည် မည်သူ့ကိုမျှ ဂရုမစိုက်ဘဲ မိမိတရား အလုပ်ကိုသာ မလျှော့တမ်း ဇွဲသန်သန်ဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရာ
(၁၀.၁၀.၁၉၂၀) ည(၁၀)နာရီခန့်တွင် တစ်ကိုယ်လုံးရှိသမျှ အကြောအခြင်တွေ ပြတ်သွားမတတ်
အလွန်ပြင်းထန်လှသည့်ဝေဒနာကို သည်းခံပြီးနောက် တတိယအကြိမ်တရားထူးကို ရတော်မူပြန်၏။
နောက်တစ်နေ့၌ မိမိရှေ့တွင် မိုးကြိုးကျသော်လည်း အလျင်းပင် မထိတ်လန့်မတုန်လှုပ်တော့သည်ကို တွေ့ရ၏။
လူ့ဝတ်ကြောင်ဘ၀ကို သေခန်း၊ ရှင်ခန်းဖြတ်ခြင်း ဆက်လက်တရားအားထုတ်ရင်း အာရုံနောက် တစ်ကောက်ကောက်
လိုက်နေကြသည့် လူတွေကြား မနေလိုစိတ်၊ ရဟန်းပြုလိုစိတ် ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် ဇနီးသည်ထံ
သာသနာဘောင် ၀င်ခွင့်တောင်းရာ ခွင့်မပြုသဖြင့် အတော်ကြာသွား၏။ တခြားလူများကပါ ဒေါ်ရွှေရီကို နားချတော့မှ
ဆယ့်လေးငါးရက်ခန့် ခွင့်ပေးသော်လည်း ဒေါ်ရွှေရီက ထယ်ရေးပက်လက်နဲ့မို့ ရဟန်းမခံမီ ပဲကလေးကြဲပေးခဲ့ရန်
ပြောသဖြင့် ပဲကြဲရန် (၁.၁၁.၁၉၂၀) တွင် နွားတစ်ရှဉ်း နှင့် ယာထဲဆင်းရပြန်၏။ ယာထဲရောက်၍ ထွန်ပေါ်တက်၊
နွားငေါက်သောအခါ ဘယ်တုန်းကမှ ထုံပေပေ မနေတတ်သော နွားနှစ်ကောင်သည် လှည့် ကြည့်၊လှည့်ကြည့်နှင့် မသွားဘဲ
ရပ်နေကြ၏။ ငါတော့မဖြစ်ချေဘူး၊ နွားနှစ်ကောင်ကတောင် နှင်နေပါပေါ့လား၊ “ ဒီတစ်ခါမှ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်
ဘာအသုံးကျသေးလဲဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်တင်ပြီး ထွန်ပေါ်ကဆင်း၊ ထွန်ကလန့်ကိုဖြုတ်၊ ထွန်ကိုင်း ကိုကိုင်၊
ထွန်တုံးကိုထောင်ကာ မင်းတို့နဲ့ ငါနဲ့တော့ သေခန်းရှင်ခန်းပြတ်ကရောပေါ့ကွယ် ဟုဆိုပြီး နွားနှစ်ကောင်ကိုပါ ကြိုးဖြုတ်၍
ဘေးမဲ့ပေးလိုက်တော့၏။” ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ အသွားလမ်းတွင် ဒေါ်တင်က ဧကသီအနွမ်းကလေးတစ်ထည်ကို
ဒေါ်ရွှေရီမသိစေနဲ့ ဟုမှာပြီးပေးလိုက်၏။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရောက်သောအခါ ဘုန်းကြီးက သင်းပိုင်တစ်ထည်စွန့်ပြီး
ရှင်က၀ိဆိုသောဘွဲ့နှင့် ရှင်သာမဏေအဖြစ် ချီးမြှင့်ပေးလိုက်၏။ ဆုတောင်းတာနဲ့ ရဟန်းဖြစ်တာ တစ်နှစ်သာကြာ၏။
သာမဏေဖြစ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ရှင်က၀ိသည် စွန်းလွန်းရွာ တောင်ဘက် မောင်ရင်ပေါ်ချောက်သို့
တစ်ကိုယ်တည်းသွားပြီး တရားအားထုတ်နေတော့၏။ ဦးကျော်ဒင်သင်္ကန်းဝတ်ပြီး (၅) ရက်အကြာတွင် ဦးရွှေလုပ်လည်း
ရှင်ဝိဇယအမည်နှင့် သင်္ကန်းဝတ်ပြီး ရှင်က၀ိနှင့်အတူ လာရောက်နေထိုင်၏။
ကိုရင်ကြီးဘ၀ဖြင့် ရဟန်းကိစ္စပြီးခြင်း၊သာသနာပြုတော်မူပြီး ခန္ဓာဝန်ချတော်မူခြင်း
တစ်နေ့ ကျောင်းဘေးနားတွင် မှိုကြီးတစ်ပွင့်ပေါက်နေသည်ကို ကိုရင်ကြီးရှင်က၀ိတွေ့မြင်ရ၍ ဆွဲနုတ်လိုက်ရာ
မှိုငုံကလေးများပါ တစ်အုံလုံးပါလာသဖြင့် သံသရာဝဋ်ဒုက္ခမှ ကျွတ်လွတ်တော့မည့် အတိတ်နိမိတ်ဟု အားတက်ကာ
အရိုးကြေကြေ အရေခမ်းခမ်း မပြတ်မလပ် နောက်မဆုတ်တမ်း ဆက်လက်အားထုတ်၏။ (၉.၁၁.၁၉၂၀) အင်္ဂါနေ့ည
(၁၀)နာရီခန့်တွင် ငွေစောင်းတန်းကြီးတစ်ခုကို မြင်လာပြီး ၀ီဝီ၀ီဝီဟု မြည်လျက် ရထားပျံတစ်စင်း အလွန်အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့်
မိမိထံ တည့်တည့်လာနေသည်ကို တွေ့သော်လည်း ဂရုမစိုက်ဘဲ တရားကိုသာ အားထုတ်မြဲ အားထုတ်နေစဉ်
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့လာကာ အထက်သို့မြောက်သွား၏။ ငြိမ့်ခနဲဖြစ်သွားသဖြင့် ကြည့်သောအခါ ရထားက
မိမိအောက်သို့ရောက်နေပြီး ထောင့်လေးထောင့်တွင် နတ်မင်းကြီးလေးပါးနှင့် လက်ယာဘက်တွင်
သိကြားမင်းကိုမြင်ရခြင်းကြောင့် တရားထူးရတော့မည်ဖြစ်၍ လာရောက်စောင့်ရှောက်သည်ဟု ထင်မိပြီး ဣရိယာပုတ်ကို
မပြင်ဘဲ တရားအားထုတ်မြဲအားထုတ်ရာမှ စတုတ္ထ အကြိမ် နောက်ဆုံးတရားထူးကို ရခြင်းဖြစ်၏။ ရှင်က၀ိသည်
ကိစ္စပြီးသည်နှင့် သတိရ၍ ကြည့်လိုက်ရာ သိကြားမင်းအပါအ၀င် နတ်မင်းကြီးလေးပါးနှင့် ရထားပျံပါ
ကွယ်ပျောက်သွားကြ၏။ ထိုသို့ စတုတ္ထ မဂ်ရပြီးနောက် အထက်ဘ၀ဂ်မှ အောက်အ၀ီစိတိုင်အောင်
ဟင်းလင်းပြင်ကြီးဖြစ်ကာ အကုန်အစင်မြင်ရ၏။ အတွင်းလောကသုံးပါး၊ အပြင်လောကသုံးပါး၊ ဘုရားဂုဏ်တော်၊
တရားဂုဏ်တော်များကိုလည်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိမြင်လာ၏။ နတ်ပြည်ပြန်သွားကြသော
သိကြားမင်းနှင့်နတ်မင်းကြီးလေးပါးက လူ့ပြည်မှာ ရဟန္တာတစ်ပါးပေါ်ထွန်းနေပြီ သွားဖူးကြဟုတစ်ခဲနက်
ကြွေးကြော်နေသည်ကိုပါ တွေ့မြင်ရ၏။ ထို့နောက် ဘုမ္မစိုး၊ ရုက္ခစိုးနတ်များနှင့်တကွ အထက်နတ်ဗြဟ္မာများ
ဖူးမျှော်ကန်တော့လာကြသည်ကို ကြည့်မဆုံးနိုင်အောင် မြင်ရ၏။ အတိတ်ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်းအထွေထွေ ရှင်က၀ိသည်
မိမိဘယ်ဘ၀ကလာသည်ကို အကျိုးပေါ်ကနေပြီး အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ကြည့်ရာ တိရစ္ဆာန် အမျိုးမျိုး ဖြစ်ခဲ့သည်ကများပြီး
လူဘ၀ရတာ အလွန်နည်းကြောင်းတွေ့ရ၏။ ကျင်လည်ခဲ့သမျှ ဘ၀များကို ကြည့်မဆုံးနိုင်သဖြင့် ဘယ်ဘ၀က
အကြောင်းကြောင့် ယခုဘ၀အကျိုးထူးရသည်ကို အမြန်သိအောင် အဓိဋ္ဌာန်ယူပြီး ကြည့်တော့မှ ယခုဘဒ္ဒကမ္ဘာ
ကဿပဘုရား လက်ထက်တော်က ကျေးသားကြက်တူရွေး ဘ၀ဖြင့် ဘုရားရှင်အား သစ်သီးကပ်လှူ ဆုတောင်းခဲ့ဖူးသော
အကြောင်းကို တွေ့ရ၏။ အဟိတ်တိရစ္ဆာန်ပင် ဖြစ်သော်လည်း ပါရမီအထုံနှင့် ကုသိုလ်ဟုန်မကင်းသောကြောင့်
ကဿပဘုရားရှင်ကို ဖူးမြင်ရသည့် တစ်ခဏ၌ အလွန်ထူးမြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဟု အောက်မေ့ဆင်ခြင်
ဇောစေတနာဝင်သဖြင့် ကဿပဘုရားရှင်ထံတော်ပါး၌ အတောင်နှစ်ဘက်ထိပ်မှာ ယှက်မိုးလျက် ရှိခိုးပူဇော်ကာ
သစ်သီးဆွမ်းလှူဒါန်းရှာ၏။ ဘုရားရှင်က အလှူခံတော်မူပြီး ဤဒါနကောင်းမှုကြောင့် သင်လိုလား တောင့်တတဲ့ဆုအတိုင်း
ပြည့်စုံစေလို့ မိန့်ခွန်းတော်ချွေလိုက်၏။ ဘုရားရှင် ကြွသွားတော်မူသည်ကို ရှုမျှော်ရင်း ဤအရှင်မြတ်အား တတ်စွမ်းသမျှ
သစ်သီးဆွမ်းဒါနဖြင့် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းရသည်မှာ လွန်စွာအဖိုးထိုက်လေစွဟု ကျေးသားလေးမှာ ၀မ်းသာအားရ
ရွှင်လန်းစွာဖြင့် မြွက်ဆိုကျူးရင့်၏။ ထူးမြတ်သော စေတနာဇော အလွန်သန်သဖြင့် ကျေးသားဘ၀ စုတေသောအခါ
ကာမသုဂတိ ခုနစ်ဘုံတွင် သူတကာနဲ့မတူအောင် စည်းစိမ်တွေအမျိုးမျိုး ခံစားခဲ့ရပြီး လူ့ပြည်သို့ ရောက်ပြန်တော့လည်း
တက္ကသိုလ်ပြည်ဌာန၌ အလွန်ထင်ရှားသော ပါမောက္ခဆရာကြီးတစ်ပါး ဖြစ်ရပြန်၏။ ဆေးဆရာကြီးဘ၀တုန်းက
တွေ့ကြုံဆက်ဆံဖူးသူတိုင်း ငါ့ထံရောက်ကြလိမ့်မယ်၊ ငါဆုံးမတဲ့အတိုင်း ငါ့တရားကို အားထုတ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်ဟု
အမိန့်ရှိတော်မူခဲ့ဖူး၏။ ၎င်းဘ၀မှ တစ်ဖန်စုတေ၍ သံသရာကျင်လည်ခဲ့ပြန်သော် ဂေါတမဘုရားသာသနာတော်အတွင်း
သုဝဏ္ဏ ဘုမ္မိသထုံပြည်ကြီးကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တော်မူခဲ့သော သာသနာ့ဒါယကာ မနုဟာမင်းကြီး
ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရာ ဘားမဲ့ဆရာတော် ဖြစ်ရပြန်၏။ ၄င်းဘ၀မှ တစ်ဖန်စုတေ၍ သံသရာကျင်လည်ခဲ့ပြန်ရာမှ မြင်းခြံမြို့
စွန်းလွန်းရွာရှိ ခမည်းတော်ဦးသန့်၊ မယ်တော်ဒေါ်တုတ်၏ ၀မ်းတွင် ကိန်းအောင်း၍ စွန်းလွန်းဂူကျောင်း
ဆရာတော်လောင်းလျာကို မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်၏။ ကိုယ့်အကျိုးအောင်လို့ အများအကျိုးဆောင်နိုင်ပြီ
ရဟန်းကိစ္စပြီးသည့်နောက် နှစ်ပေါင်း (၃၁)နှစ်တိုင်တိုင် ဝေနေယျများစွာတို့၏ အကျိုးအတွက် နိဗ္ဗာန်လမ်းပြ
တရားအားထုတ်နည်းနှင့် သစ္စာလေးပါးတရားတော်မြတ်များကို ဟောကြားညွန်ပြ ဆုံးမတော်မူသွား၏။
စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးထံတွင် ဆရာစန္ဒြ တရားအားထုတ်စဉ်က တပည့်တော် ပညာဓိက ဘုရားဆု
ပန်ထားပါသည်ဘုရား၊ ဤဘ၀တွင်မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရားမလိုချင်သေးပါဟု လျှောက်မိရာစွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီးကမင်းသတ္တိ ကောင်းတဲ့ကောင်ပဲ၊ ခံပေဦးတော့၊ တို့တော့အေးရာကို မြန်မြန်သွားချင်ပြီ၊ အေးတဲ့နေရာအကောင်းဆုံးပဲဟုမိန့်တော်မူပြီးနောက် လေးငါးနှစ်ခန့်အကြာ (၁၇.၅. ၁၉၅၂) စနေနေ့တွင် ခန္ဓာဝန်ချတော်မူ၏။“ငါသေရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့
ထိုးထားလိုက်”ဟူသောမိန့်ကြားချက်အတိုင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ (အူ၊ အသည်း
ထုတ်ခြင်း၊ ဆေးစိမ်ဆေးထိုးခြင်း မရှိဘဲ) ပကဓိ မပုပ်မသိုးသော ရုပ်ကလာပ်တော်ကို မြင်းခြံမြို့တွင် ယနေ့တိုင်ဖူးတွေ့နိုင်ပါ၏။ စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် စာမတတ်ဘဲ တရားထူးရအောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သူအဖြစ်ဖြင့်ဘုရားရှင်၏တိမ်မြှုပ်နေသော ပဋိပတ္တိသာသနာနှင့် ပဋိဝေဓသာသနာကို အရှိန်အဟုန် ပြင်းစွာဖြင့် ပြန်လည်အစပြုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သည့်အပြင် ယနေ့တိုင်လည်း ထိသိသတိ စွန်းလွန်းတရား အားထုတ်နည်းဖြင့် ဘုရားရှင်၏ပဋိပတ္တိသာသနာကို အခိုင်အမာ အားဖြည့်ရပ်တည် ပေးလျှက်ရှိပါ၏။ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပထမဦးဆုံးဟောကြားတော်မူသော တရားတော် ( ၉ မိနစ် ၉ စက္ကန့်) ကို ပူးတွဲပါဖိုင်ဖြင့်နာယူနိုင်ကြပါကုန်။
ကံကို ရွက်လွှင့်ပြီး သံသရာပင်လယ်ကြောမှာ မျောနေသူများလည်း ကံရွက် ပေါက်သည်၊ ပြဲသည်ရှိက ဘယ်လိုဖာ ဘယ်လို ပြင်ရသည် ကို သိရပေမည်။ ဉာဏ်ကို ရွက်လွှင့်ပြီး နိဗ္ဗာန်သောင်ကမ်း ငြိမ်းအေးသည့်စခန်းဆီသို့ ဦးတည်ဦးတိုက်ခုတ်မောင်း နေသူများလည်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သဘာဝအသွင်ကို ဉာဏ်မျက်စိဖြင့် ရှုမြင်တတ်ဖို့အလုပ်ပေးတရားတော် ကိုလည်း သိခွင့်ရပါမည်။
ဉာဏ်စခန်းအတွက် ဆရာတော်ကြီးတရားမှ အနှစ်ချုပ် မျှဝေပေးလိုသည်မှာမြင်စိတ်
ပေါ် သညာဖုံး၊ သညာဖုံးတော့ ဘာဖြစ်? သညာဖုံးတော့ အနိစ္စကို(မမြဲသဘောကို) (တည်တံ့ခိုင်ခံတည်နေသဘော)နိစ္စမြင်၊ ဒုက္ခကို(ဆင်းရဲ၊ ပျက်စီး၊ ဖျက်ဆီးခံသဘောကို)(
ချမ်းသာ၊ ငြိမ်းချမ်း၊ ငြိမ်းအေးသည့်သဘော)မင်၊ အနတ္တကို( မစိုးမပိုင် အစိုးမရသဘောကို) အတ္တ(
ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ဆိုင် စိုးပိုင်သဘော) မြင်၊ အသုဘကို(မတင့်တယ်သည့် သဘောကို) သုဘ(
တင့်တယ် ပြေပြစ် ချောမော လှပသဘော) မြင်၍ အလိမ်ခံနေရပြီ။ အလိမ်ခံပြီး
လောဘဖြစ်၊ အလိမ်ခံပြီး ဒေါသဖြစ်၊ အလိမ်ခံရသည်က မောဟ၊ ဤသို့ အလိမ်ခံနေသမျှ ဒုက္ခအကြီးအကျယ် ဆင်းရဲအဖုံဖုံသံသရာမှာ တွေ့ကြုံလို့ မဆုံးတော့ပြီ။
မြင်စိတ် ပေါ် ပညာသုံး၊ ပညာသုံးတော့ ဘာဖြစ်? ပညာသုံးတော့ အနိစ္စကို အနိစ္စမြင်၊ ဒုက္ခကို ဒုက္ခကိုမြင်၊
အနတ္တကို အနတ္တမြင်၊ အသုဘကို အသုဘမြင်၊ ဤသို့ အမြင်မှန်ပေါ်၊ အမြင်မှန် ဉာဏ်ဧကန် ရင့်သန်လျင် ခန္ဓာ၌အလွန်တွယ် အလွန်မက် အလွန်ဆာ အလွန်ကပ်သည့် တဏှာဓာတ်ကုန်။ တဏှာကုန် ခန္ဓာသိမ်း၍ ဒုက္ခပေါင်း ငြိမ်းသည့်အငြိမ်းဓာတ်ချမ်းသာ၌ ထာဝရတည်းခြင်း နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို အမြဲပိုင် အမြဲဆိုင် ရနိုင်ကြစေသောဝ်။